ပြည့်စုံ: August 2009
Pyae Sone | 9:02 AM | လတ်တလော ခံစားမှု | အတွေး အရေး
အပ္ပိယေဟိ သမ္ပယောဂေါ ဒုက္ခော၊ ပိယေဟိ ဝိပ္ပယောဂေါ ဒုက္ခော၊ အစကဒါတွေနားမလည်ခဲ့ဘူး ဒါလေးများဘာမိတွန်သောက်ပျောက်ပေါ့ထင်ခဲ့မိတယ်…။ တကယ်တော့ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်တိုင်းမှာ အမှတ်ရစရာအတွေ့ကြုံလေးတွေဖြစ်ဖူး ရှိဘူးကြမှာပါ။
ကျနော်တို့ပျော်ရွှင်ခဲ့တယ်၊ ကျနော်တို့ဝမ်းနည်းခဲ့တယ်၊ ကျနော်တို့ ရူးသွပ်ခဲု့ကြတယ်၊ ကျနော်တို့ စွဲလမ်းခဲ့ကြတယ်၊ နောက်ဆုံးတော့လည်းကျနော်တို့လမ်းခွဲခဲ့ကြတယ်…။ တစ်စုံတယောက်က တစ်စုံတရာကို စောင့်ရသလိုမျိုး တစ်စုံတရာက တစ်စုံတယောက်ကို ထားခဲ့သလိုမျိုးနဲ့ နှလုံးသားရေလည်အုံကြီး စုပ်ကွဲတဲ့အထိပေါ့…။
တချိန်ကကျနော့်ရင်ထဲကို ပုစ္ဆာလေးတစ်ပုဒ်ဝင်ရောက်မွှေနှောက်ခဲ့တယ် ပျော်ရွှင်ပြီးလွတ်လပ်မှုကိုမြတ်နိုးတဲ့ ကျနော့်ကိုမှ ကံကြမ္မာက ကျီစယ်တာလား ရှေးရေစက်ကြောင့်လားမသိ ကျနော့်စိတ် ကျနော့်အသိ ကျနော့်အာရုံတစ်ခုလုံးကိုဖမ်းစားစေတဲ့ ပုစ္ဆာလေးပေါ့…။ အထိအတွေ့ကြောင့်လား ကျနော်တွေးတတ်လာခဲ့တယ်၊ ဆွေးတတ်လာခဲ့တယ်၊ ကျနော့်ကြိုးစားမှုကြောင့်လား ကံကြမ္မာမျက်နာသာပေးမှုလားတော့မသိ
ကျနော်မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အသက်ရှင်စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေ အကောင်ထည်ဖော်ဖို့ ကျနော်ကြိုးစားခဲ့တယ် ကျနော်ရိုးသားခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် မတည်မြဲတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတရားကြောင့် ကျနော့်အိပ်မက်ရှည်တွေပျက်သုဉ်းခဲ့ချိန်ပေါ့ ကျနော်ရရှိခဲ့တဲ့ဖြေ ကျနော်မြတ်နိုးတန်ဘိုးထားတဲ့အရာက အစစ်အမှန်မဟုတ်ခဲ့ဘူးလေ…။ ကျနော်နားလည်ပါတယ် ကျနော်တို့ထာဝရတည်မြဲတယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ မိုးကောင်းကင်ကြီးတောင်မှ နေရာဒေသအလိုက် ရာသီဥတုအလိုက် ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ကုန်ပြီလေ…။
ကမ္ဘာ့မြေပြင်တောင် တစ်ခါတစ်ရံ ကွက်တိကွက်ကြား ငလျင်လှုပ်ခဲ့တယ်..။ သက်ရောက်မှုတိုင်းမှာ တန်ပြန်သက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့တဲ့ကျနော် အဖြေမှားကိုမှ အမှန်ထင်ခဲ့တယ်…။
သူငယ်ချင်းတို့လည်းတစ်သက်မှာတစ်ခါလောက်တော့ ပုစ္ဆာလေးတစ်ပုဒ်လောက်တော့တွက်ဖူးမှာပါ ကိုယ်တွက်တဲ့ပုစ္ဆာလေး အဖြေမှန်ရဖို့ဆုတောင်းဖူးကြမှာပါ…।။
တစ်စုံတယောက်က တစ်စုံတရာကို စောင့်ရသလိုမျိုး
တစုံတရာက တစ်စုံတယောက်ကို ထားခဲ့သလိုမျိုးနဲ့
Anonymous + ပြည့်စုံ
အချိန် - 9:02 AM
စိတ်ဖိစီးမှုနည်းပါးအောင် ထိန်းသိမ်းခြင်း အပိုင်း(၂)
Pyae Sone | 10:32 PM | ဆောင်းပါး
လူမှုဆက်ဆံရေးလောကတွင် ကျွမ်းကျင်အဆင်ပြေသူတစ်ဦးဖြစ်လိုက သူတစ်ပါး၏သဘောကို သိရှိနားလည်တတ်ရန်လိုသကဲ့သို့ မိမိ၏ စိတ်ဓါတ်၊ မိမိ၏အမူအကျင့်များကိုလည်း ဝေဖန်သုံးသပ်ပြုပြင်တတ်ဖို့လိုပေသည်။
သင်သည် အခြားသူများ၏ အထင်အမြင်ကို ဂရုစိုက်လွန်းနေသည်လား၊ သင့်အလုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ မကျေနပ်နိုင် စိတ်တိုင်းမကျနိုင် ပြင်၍ဆင်၍မပြီးနိုင် ဖြစ်နေခြင်းသည် သင့်မှာစိတ်ကျအားငယ်မှုတစ်ခုခုငုပ်လျှိုးတည်ရှိနေ၍လား၊ သူတစ်ပါးဝေဖန် ပြောဆိုမှုကို သင်ကြောက်နေသည်ဆိုပါစို့။ ကြောက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းသည် ဘာလဲ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်စူးစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်သည့်အခါ အကယ်၍ ကိုယ့်မှာ အပြစ်အနာအဆာတွေချို့ယွင်းချက်တွေ အမှန်တကယ်ရှိနေက ယင်းတို့ကွယ်ပျောက်အောင် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခြင်း၊ ဖြည့်ဆည်းခြင်းများပြုနိုင်သကဲ့သို့ မိမိ၌ တကယ်တမ်းမချို့ယွင်းဘဲ စိတ်ကျအားငယ်ခြင်းသာရှိနေသည်ဆိုက မိမိစိတ်ကိုပင် ထိန်းကျောင်းပြုပြင်ကာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရပ်တည် ကျင်လည်သွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လူသည် သူတစ်ပါးနှင့်လိုက်လျောညီထွေနေရန် လိုသကဲ့သို့ ကိုယ့်အရေး ကိုယ့်ကိစ္စကိုလည်း ဂရုစိုက်ရန်လိုပေသေးသည်။ သူတစ်ပါးအပေါ် သဘောကောင်းသလို မိမိကိုယ်တိုင်အပေါ်လည်း သဘောကောင်းတတ်ဖို့လိုသည်။ သို့မှသာ ရေရှည်စိတ်ချမ်းသာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အချို့လူများမှာ လူတကာ၏ ကိစ္စ၊ လူတကာ၏ ပြဿနာတွင်ဝင်ပါတတ်၊ ၀င်ကူတတ်၏ သဘောကောင်းသူ၊ ချဉ်းကပ်ရလွယ်သူအဖြစ် လူသိများလာသည့်အခါ တဖြည်းဖြည်း လူတကာ အားမနာ ပါးမနာ သူ၏အချိန်ရော လုပ်အားကိုပါ အလွယ်တကူ ရယူသုံးစွဲလာကြတော့၏ သဘောကောင်းသော လူခမျာ သူတစ်ပါး ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးများကို ထမ်းရင်းအချိန်ကုန် လူပန်းကာ ကိုယ့်အလုပ်ကို အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်ဖြစ်လာပြီး နောက်ဆုံး၌ အရာမ၀င်သူ၊ အရည်အချင်းမရှိသူ၊ သူတစ်ပါးအလုပ်တွင် အဖော်လိုက်ရုံသက်သက်လောက်သာ တတ်နိုင်သူအဆင့်သို့ လျှောကျသွားတတ်ပေသည်။
ထို့ကြောင့် မိမိအပေါ် ဖိစီးလာမည့် အကူအညီမျိုး တောင်းခံလာလျှင် မိတ်ဆွေကို ဖြစ်စေ၊ ဆွေမျိုးကိုဖြစ်စေ၊ သဘောကောင်းလွန်မနေဘဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ငြင်းဆိုတတ်ရန် လိုပေသည်။ ထိုသို့ ငြင်းသဖြင့် လတ်တလောတွင် အားနာစရာဖြစ်ချင်ဖြစ်တတ်သော်လည်း သည်နည်းဖြင့်သာ ရေရှည်စိတ်ညစ်ရမည့်ဘေးမှ ကင်းဝေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
လူ၌ စိတ်ဖိစီးမှုနည်းပါးအောင် ကာကွယ်သည့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားတစ်ရပ်က မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ်ဖြစ်သည်။
ယုံကြည်စိတ်ပြည့်ဝသည့်အခါ မိမိဦးတည်ရည်မှန်းသည့်အရာကို ရအောင် အကောင်အထည်ဖော်မည့် အစွမ်းသတ္တိများရှိလာသကဲ့သို့ အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းများကိုလည်း ကြံ့ကြံ့ခံကျော်လွှားနိုင်လာသည်။
လူသည်မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ရန်အတွက် သူ့ခေါင်းထဲတွင်ရှင်းလင်း ပြတ်သားနေရန်လို၏ ခေါင်းထဲရှင်းနေရန်အတွက် စဉ်းစားစရာရှိသမျှ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ စဉ်းစားဝေဖန်ထားရန်လို၏။
စဉ်းစားသောအလုပ်ကို သူတစ်ပါးနှင့်လုပ်၍မရ၊ ကိုယ့်တစ်ကိုယ်တည်းပဲလုပ်ရမည်ဖြစ်၏။ မိမိနှင့်အကြိတ်အနယ် ငြင်းခုံဝေဖန်ကာ ငါ့ရည်မှန်းချက်သည် ဘာ၊ ငါ့လက်ရှိ အရည်အချင်းအစွမ်း သတ္တိက ဘာ၊ ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရေးအတွက် ရေရှည်လုပ်ရမည်က ဘာ၊ လက်တလော လုပ်သင့်သည်က ဘာ စသည်ဖြင့် ခေါင်းထဲတွင် ရှင်းလင်းပြတ်သားသွားပြီဆိုလျှင် ရဲဝံ့ယုံကြည်စိတ်တွေ ပြည့်ဝလာမည်။ စိတ်အားသတ္တိတွေ ကြီးမားလာမည် ဖြစ်သည်။
သည့်အတွက် အခါအားလျော်စွာ တစ်ကိုယ်တော် ခေါင်းရှင်းချိန်ကလေး ပေးထားရန်လို၏။ တစ်ယောက်တည်း လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်းသော်လည်းကောင်း၊ စာကြည့်တိုက်မှာ၊ ဘုရားကျောင်းကန်မှာ၊ ပန်းခြံထဲမှာ၊ နေအိမ်က တိတ်ဆိတ်သောအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ ငြိမ်သက်စွာထိုင်ရင်းသော်လည်းကောင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းလွတ်လပ်စွာ စကားပြောကာ ခေါင်းရှင်းနိုင်ပေသည်။
နေ့စဉ်ခေါင်းရှင်းချိန်အနည်းငယ်စီပေးထားမည်ဆိုက ဦးတည်ချက်ပြတ်သားကာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်စိတ်များ အစဉ်ပြည့်ဝနေမည်ဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါးမှ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများ တစုံတခု ရလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကျေနပ်ပါတယ်....။
ကိုးကား။ ။ (Ari Kiev ၏ A Strategy for Daily Living )
အချိန် - 10:32 PM
စိတ်ဖိစီးမှုနည်းပါးအောင် ထိန်းသိမ်းခြင်း အပိုင်း(၁)
Pyae Sone | 6:54 PM | ဆောင်းပါး
ကျနော်လည်း ဖိစီးမှုတွေများနေတာနဲ့ ဘာမှပုံဖော်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်... တခုပြီးတခု တခုပြီးတခု အလွဲတွေချည်းဖြစ်ဖြစ်နေတယ်... လိုချင်တာတွေ လိုအပ်တာတွေ ဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်သင့်တာတွေကလည်း ဘယ်အချိန်မှ ဆန္ဒနဲ့ ဘ၀ တထပ်တည်းကျမလည်းမသိပါဘူး...။ အဲဒီလိုနဲ့ကျနော်လည်း ဘာကြောင့်လည်းဆိုပြီး လေ့လာနေမိတယ်….
နှစ်ဆယ်ရာစု လူမှုဘ၀တွေက စိတ်ဖိစီးမှုများလွန်းသော ဘ၀ဟု ဆိုကြတယ်။ ရှေးခေတ်ကထက် အဆမတန်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာပြီး အရာရာ အလွန်မြန်ဆန်လာသောကာလဖြစ်တဲ့အလျောက် ယခုခေတ်လူများမှာ ရှေးခေတ်လူများထက် စိတ်ဖိစီးစရာအကြောင်းတွေများလာသည်ဟုဆိုလျှင် မှန်သင့်သလောက်မှန်သည်ဟု လက်ခံရမှာဖြစ်တယ်။ သို့သော် သည်ခေတ်ထဲမှာပင် အချို့လူများက စိတ်ပေါ့ပါးသက်သာနေကြပြီး အချို့လူများမှာ စိတ်ဖိစီးမှုလွန်ကဲကြီးမားနေတတ်သည်ကို သတိပြုဆင်ခြင်ကြည့်ရန်လိုပါသည်။
စိတ်ဖိစီးမှုလွန်ကဲရသည့် အဓိကအချက်တစ်ခုက မပြတ်သားခြင်းဖြစ်သည်။ သည်ကိစ္စတွင် တိကျသော ဦးတည်ရည်မှန်းချက်ရှိမရှိ ဟူသောအချက်သည်ကလည်း အတော်လေးစကားပြောပါတယ်။ ဦးတည်ချက် တိတိကျကျရှိသူသည် မိမိနှင့်သက်ဆိုင်ရာကိစ္စတွင်ပြတ်ပြတ်သားသား ကိုယ်ရောစိတ်ပါဆောင်ရွက်တတ်သည်။ သည်လူမျိုးတွင် အလုပ်တစ်ခုထဲတွင် အချိန်ပြည့်နစ်မြုပ်ချင် နစ်မြုပ်နေမည်ဖြစ်သော်လည်း လုပ်သမျှအလုပ်သည် ကိုယ့်စိတ်နှင့်ကိုယ့်ကို လုပ်နေခြင်း၊ ရဲဝံ့ကြည်စွာလုပ်နေခြင်းဖြစ်ရာ သူ့၌ စိတ်ဖိစီးမှု အလွန်နည်းပါးသည်။
ဦးတည်ချက် မရေရာသူများမှာ နေရာတကာပင်မပြတ်သား ချီတုံချတုံ၊ အများသဘောအများလက်ခံမည့်ပုံစံအတိုင်းလိုက်၍ လုပ်မိတတ်ကြသည်။ သူများစိတ်နှင့် ကိုယ့်ကိုယ် အလုပ်လုပ်ရသည့်အခါ ထက်သန်စိတ်နည်းသဖြင့် အောင်မြင်ရန်ခဲယဉ်းသွားတတ်သည်။ သည်အခါ သည်အလုပ်လုပ်မိခဲ့တာ မှားလားဟု ပြန်တွေးတောပြီး စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရပြန်သည်။
ဤသို့ဖြင့် ဦးတည်ချက်မခိုင်မာသူများမှာ မရေရာ မသေချာ နေထိုင်လည်ရင်း စိတ်ဖိစီးမှုဒါဏ်ကို သူတကာထပ်ခံနေရတတ်ပေသည်။ အချို့လူများတွင် စိတ်ဖိစီးမှုလွန်ကဲရသည့် အကြောင်းတစ်ခုကား အရေးပါလွန်းခြင်း၊ အထအနကောက်တတ်လွန်းခြင်းဖြစ်သည်။ သူတစ်ပါးအမှတ်တမဲ့ပြောလိုက်သည့် စကားတစ်လုံးကို အဓိပ္ပါယ်ဆွဲဆန့်ကာ ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ ဖြစ်တတ်သူ၊ တစ်ဖတ်လူ၏ အမူအရာမှာ မိမိကို မလေးစားသည့်အရိပ်အရောင်ရိုးတိုးရိုးတိတ်ပါသည်ထင်လျှင်ပင် မခံချိ မခံသာ ဖြစ်တတ်သူ၊ သည်လူမျိုးများမှာ လူ့လောကတွင် ကျင်လည်နေသည့် ဘ၀တစ်လျှောက် စိတ်ချမ်းသာချိန် အလွန်နည်းပါးနေမှာ သေချာသည်။
" လောကကြီးမှာ လူတိုင်း သူ့ဘောနှင့် သူရပ်တည်နိုင်ကြသည်ပဲ၊ လူ့စိတ်ဆိုသည်က မတည်ငြိမ်၊ အမြဲပြောင်းလဲနေတတ်သည်။ မနေ့က ကြည်ဖြူသူသည်လည်း သည်ကနေ့ တစ်မျိုးတစ်မည် ဖြစ်နိုင်သည်။ မနက်ဖြန်ကျတော့ သဘောတွေ အရမ်းကောင်းချင်ကောင်းနေဦးမည် " စသည်ဖြင့် စဉ်းစားနားလည်ကာ သူ့ဘက်က ကိစ္စကို အလေးထားမနေဘဲမိမိ ဘက်ကအပြုသဘောဆောင်သော ဆက်ဆံမှု၊ အကောင်းဘက်ကို မျှော်လင့်သော စိတ်ထားတို့ဖြင့်သာ တစ်သမတ်တည်း သွားနိုင်အောင် ကြိုးစားမည်ဆိုက ရေရှည်တွင် တစ်ဖတ်သားတို့ထံမှ ခင်မင်မှု၊ ယုံကြည်မှု၊ အပြုသဘောဆောင်သည့်တုံ့ပြန်မှုများ မုချရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
အချိန် - 6:54 PM
Pyae Sone | 9:50 PM | လတ်တလော ခံစားမှု
ကျနော့်ရဲ့ဘလော့ဘ်လေးကို အလည်လာကြသူများအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျနော်လည်း ပို့စ်အသစ်တင်မယ်ဆိုပြီး မတင်ဖြစ်တာ ကြာသွားတယ် ကျနော်လည်း ကိုယ့်စိတ်ကို စုစည်းလို့မရဖြစ်နေတယ် အခုတလော အာရုံတွေများနေတယ်လေ… ဘယ်လိုသံသရာတွေ ကွေးကောက်ခဲ့လို့လည်းမသိပါဘူး ခံစားမှုတွေ၊ ကြေကွဲမှုတွေ အစုံပါပဲ …။ ပို့စ်အသစ်တင်မှာပါ မပြီးဆုံးသေးတဲ့ ခရီးတွေအတွက် ဆက်လက်ချီတက်ရင်းပေါ့ အဆိုအမိန့်တခုလိုပေါ့ ဘ၀ဆိုတာ မြစ်တစင်းလိုပဲ ဘယ်တော့မှ ရပ်တန့်မသွားဘူး အမြဲတမ်းစီးဆင်းနေတယ်….။
အချိန် - 9:50 PM
Pyae Sone | 8:57 PM | Statement | ဆောင်းပါး
ဤဓါတ်ပုံအား ကိုနစ်နေမန်းဘလော့မှ ကူးယူသည်။
မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတို့သည် အသက်၊သွေး၊ ချွေးများစွာစတေးကာ နယ်ချဲ့နှင့် ဖက်ဆစ်စနစ်တို့ကို တိုက်ပွဲဝင်၍လွတ်လပ်ရေးကိုရယူခဲ့သည်။ တိုင်းတပါးကျွန်ဘ၀မှ လွတ်မြောက်ပြီးလွတ်လပ်ရေး၏ အနှစ်သာရကို ခံစားခွင့်မရမီ စစ်အုပ်စုက နိုင်ငံ၏အချုပ်အခြာအာဏာကို သိမ်းယူခဲ့သည်။ မြန်မာလူထုသည် စစ်အာဏာရှင်တို့အား တိုင်းရင်းသား လက်နတ်ကိုင်တော်လှန်ရေးများ၊ ကျောင်းသား၊ အလုပ်သမား၊ တောင်သူလယ်သမားစသည့် အလွှာအသီးသီးတို့၏ လှုပ်ရှားမှုများ၊ မှိုင်းရာပြည့်နှင့် ဦးသန့်အရေးအခင်းကဲ့သို့ အချိန်အခါသင့်တိုက်ပွဲများ စသည့် သဏ္ဌာန်မျိုးစုံဖြင့် တလျှောက်လုံးဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် ခေတ်ကာလ အဆက်ဆက် တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၈)ရက်နေ့တွင်ကား…
လွန်ခဲ့သည့် (၂၁)နှစ် သြဂုတ်လ၌ မြန်မာနိုင်ငံတ၀န်းလုံးတွင်အုပ်စိုးမှု ဆန့်ကျင်သည့် လူထုအရေးတော်ပုံကြီးများဖြင့် မြန်မာ့သမိုင်းအား ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ လူထုသမိုင်းဖြစ်သည်။ ဖိနှိပ်သူအားတော်လှန်သည့် လူထုတိုက်ပွဲဖြစ်သည်။ ၁၃၅၀ ပြည့် ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားများကစသည်… အလုပ်သမားတို့ပါလာသည်… လယ်သမားများပါလာသည်… ရဟန်းသံဃာများလည်း မနေသာ ပါဝင်လာကြသည်… လူတန်းစားပေါင်းစုံ၊ အလွှာပေါင်းစုံပါဝင်လာကြသည်… အိမ်ရှင်မများလည်းမနေသာ စကောများ၊ ငရုတ်ကျဉ်ပွေ့များကိုင်၍ပါခဲ့ကြသည်… နောက်ဆုံး… ဖိနှိပ်အုပ်စိုးသူ၏ ဖိနှိပ်ရေးကိရိယာများဖြစ်သည့် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ ပါဝင်လာခဲ့ကြသည်… မြန်မာ့သမိုင်း၌ ဂုဏ်ရောင်ပြောင်သည့်ကြီးမားသော တိုက်ပွဲကြီးဖြစ်သည်…။ မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ကမ္ဘာတည်သရွေ့ ဥဒါဉ်းတွင်နေမည့် လူထုအရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်သည်…။ မဆလသည် ရပ်၊ကျေးမှ နိုင်ငံတော်ကောင်စီအထိ အုပ်ချုပ်ရေးအားချထားခဲ့သည်.. တပ်အား လက်ကိုင်ဒုတ်အဖြစ် တည်ဆောက်သည်.. ဖိနှိပ်ရေးယန္တရားများအား ချဲ့သည်… ဤသို့ (၂၆)နှစ် ခိုင်မြဲခဲ့သည့် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအား ဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့သည်။ ဒီမိုကရေစီတံခါးအား တွန်းဖွင့်နိုင်ခဲ့ကြသည်… (၂၁)နှစ်ကြာခဲ့ပါပြီ… သမိုင်းသည် ခါးသက်လှပေသည် အာဏာရှင်တို့သည် သူရဲကောင်းအထောင်အသောင်းတို့ရဲ့ အသက်သွေးတို့ဖြင့် အဆုံးသတ်ပစ်ခဲ့သည်… မမေ့…. နှလုံးသားအတွင်း စွဲနှစ်၍နေဆဲ… အသွေးအသားထဲတွင် စီးမျော၍နေဆဲ… လမ်းမများထက် သွေးတို့ကား မခြောက်သေး… ကျဆုံးသူ အာဇာနည် အထောင်အသောင်းတို့၏ အရိုးများ တွန်သံပို၍ကျယ်လောင်လာသလိုခံစားမိပါသည်….။
တော်လှန်ရေးတို့မည်သည် လူထုတိုက်ပွဲဖြင့် အဆုံးသတ်ရပေသည်။ အမှန်တရားသည် အချိန်ကြာတတ်သော်လည်းနောက်ဆုံးတွင် အနိုင်ရစမြဲဖြစ်သည်။ သမိုင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲအား ငံ့လင့်လျှက်ရှိသည်။ စေ့စပ်၍မရသော လက်တစ်ဆုပ်စာစစ်အာဏာရှင်တို့၏ နိဂုံးကမွတ် အဆုံးသတ်ချိန်သည် လွန်စွာနီးကပ်လာပြီ… ရှစ်လေးလုံးအရေးတောင်ပုံကြီးသည် သမိုင်းဝင်အောင်ပွဲ တစိတ်တဒေသကို ရယူပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်… သို့ဖြင့်ရာ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ၏ စိတ်ဓါတ်ကို ကိုင်စွဲလျက် ဒီမိုကရေစီအောင်ပွဲရသည်အထိ တိုက်ပွဲဝင်ရမည့်တာဝန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ပခုံးထက်တွင်ရှိနေသော သမိုင်းပေးတာဝန်ကြီးဖြစ်သည်။
ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးတွင်ရေးစပ်ခဲ့သော အာဇာနည်များမှ အာဇာနည်များသို့ သ၀ဏ်လွှာ ကဗျာဖတ်ရှုလိုလျှင်...
ဒီမိုကရေစီအရေး တိုက်ပွဲအဆက်ဆက်ကျဆုံးသွားသော အာဇာနည်များအား ဦးညွှတ်လျှက်
အချိန် - 8:57 PM
စိတ်ဖိစီးမှုနည်းပါးအောင် ထိန်းသိမ်းခြင်း အပိုင်း(၂)...
စိတ်ဖိစီးမှုနည်းပါးအောင် ထိန်းသိမ်းခြင်း အပိုင်း(၁)...